စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေး III | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေး III
စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေး III
Posted by Kyaemon on May 20, 2012 in Business & Economics, Education, Society & Lifestyle, Think Different |9comments
CIA World Factbook Economy south korea Wikipedia
“စီအိုင်အေ CIA နဲ့ ”ဝီးကီး” စွယ်စုံ (Wikipedia) တို့ မြင်တဲ့ South Korea ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေး II ” ရဲ့အဆက်
တောင်ကို ရီးယား ရဲ့ ကုန်သွယ်ဘက်တွေ Trading Partners အ နက်မှ
တရုပ်နိုင်ငံ ဂျပန်နိုင်ငံ ယူအက်စ်အေ တို့ဟာ
သို့သော် ဘယ်နိုင်ငံ ကဘဲ တောင်ကိုရီးယား အတွက်
ကုန်သွယ်ဘက် နံပါတ် တစ်၊ နှစ်၊သုံး၊
ဘယ်အဆင့် ကနေအရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတွေ
ကုန်သွယ်ဘက် ဆိုတာ အဝင်နဲ့အထွက် “နှစ်လမ်းသွား “
အပြန်အလှန် ဖောက်ကား ဝယ်ယူကြတာကိုဆိုလိုတာ၊
ဒါကြောင့်မို့ ကိုရီးယား နဲ့ ယင်းသုံး နိုင်ငံတို့ အကြား၊
တင်သွင်း တာတွေ နဲ့တင်ပို့ တာတွေကို
နှိုင်းယှဉ် လေ့လာ နိုင်ဘို့
အောက်ပါ ဇယား (၅) နဲ့ (၆) မှာ
၂၀၀၇ ကနေ၂၀၁၂ မှတ်တမ်း များ အရ ဖျမ်းမျှအားဖြင့်
တရုပ်နိုင်ငံက နှစ်စဉ် (၁၆၄) ဘီလီယန် ဒေါ်လာနဲ့ထိပ်ကဖြစ်ပြီး၊
ဂျပန်နိုင်ငံက (၉၀) ဘီလီယန် ဒေါ်လာနဲ့ ဒုတိယ၊
ယူအက်စ်အေ က (၈၈) ဘီလီယန် ဒေါ်လာနဲ့ တတိယ ဖြစ်ကြ တာ၊
တောင်ကိုရီးယား က ယူအက်စ်ကနေ ဝယ်တယ်၊
သို့သော် ဂျပန် ကနေ ပိုဝယ်ရတယ်၊
တောင်ကိုရီးယား က ဂျပန်ကိုရောင်းတယ်၊
သို့သော် ယူအက်စ် ဆီကို ပို ရောင်းရတယ်၊
ခြုံလိုက်ရင် ဖျမ်းမျှအားဖြင့် တောင်ကိုရီးယား နဲ့ ကုန်သွယ် ရာမှာ
ဂျပန်က ယူအက်စ် ထက်သာသော်လည်း
(၂) ဘီလီယန် ဆိုလို့ သိပ်မကွာပါ၊
တရုပ် နဲ့ဂျပန်၊ ယူအက်စ်အေ
တောင်ကိုရီးယား နဲ့ ကုန်သွယ် ရာမှာ တရုပ်နိုင်ငံက ဂျပန် နဲ့ သော် ၄င်း၊
ယူအက်စ် နဲ့ သော် ၄င်း၊ နှိုင်းရင် (၂) ဆ နီးပါးတောင် ရှိ နေတာ
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တစ်ဆ ခွဲ က နေ နှစ် ဆ ရှိတာ၊
နောက်ဆုံး ၂၀၁၂ မှာ ဆိုရင် နှစ်ဆ တောင်ကျော်လာတာ၊
ကုန်သွယ် ပမာဏ ပိုမိုတာတွေ
ဖျမ်းမျှ အားဖြင့် တရုပ်နိုင်ငံက နှစ်စဉ် (၇၅) ဘီလီယန် ဒေါ်လာ ပိုတာပါ
ပိုမိုတာတွေ က (၄၁) ဘီလီယန် ကနေ (၁၄၀) ဘီလီယန် ထိ ရှိပြီး
တနှစ်ပြီး တနှစ် တက်တက်လာတာ၊
(တရုပ် နဲ့ ဂျပန် ပေါင်း) အိမ်နီးချင်း အာရှ နိုင်ငံတွေ နဲ့ ယူအက်စ်အေ နှိုင်းရင်
ဖျမ်းမျှ အားဖြင့် အိမ်နီးချင်း အာရှ နိုင်ငံတွေ က နှစ်စဉ် (၁၆၆) ဘီလီယန် ဒေါ်လာ ပိုတာပါ
ပိုမိုတာတွေ က (၁၁၈) ဘီလီယန် ကနေ (၂၅၇) ဘီလီယန် ထိ ရှိပြီး
အလားတူစွာ တနှစ်ပြီး တနှစ် တက်တက်လာတာ၊
တောင်ကိုရီးယား အတွက် တရုပ်နိုင်ငံ နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တို့ က
တောင်ကိုရီးယား က ဖွံ့ဖြိုး တဲ့နိုင်ငံ အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီး ရပ်တည် နိုင်ဘို့ရာ
အခြားနိုင်ငံတွေ ထက် အိမ်နီးချင်း တရုပ်နိုင်ငံ နဲ့ဂျပန် နိုင်ငံ တို့ကို အားကိုး
အမှီသဟဲ ပြုရတယ်လို့ပြောရင် မမှား ပါ၊
ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Yangon Crown သံမဏိစက်ရုံက ရာနဲ့ချီတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ လုပ်ခ လစာတိုးမြှင့်ရေး အပါအ၀င် အချက် ၁၃ ချက်ကို အဓိက တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ …..Yangon Crown သံမဏိစက်ရုံကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ရှင်ဟာ နိုင်ငံခြားသား တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး – ဒီစက်ရုံမှာ တရုတ်အလုပ်သမား ၀န်ထမ်းတွေလည်း ရှိပေမဲ့ – မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အဲ့ဒီ တရုတ်အလုပ်သမားတွေနည်းတူ ခံစားခွင့် အခွင့်အရေး တန်းတူမရရှိဘူးလို့လည်း ကိုအေးလွင်က ပြောပြပါတယ်။
“သူတို့အနေနဲ့က သူတို့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်ကိုပဲ facility အပြည့်ပေးတာလေ။ သူတို့မှာ စက်ရုံမှူးခွဲ ရှိတယ်လေ။ အခြား အခြေခံလစာနဲ့ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရတဲ့သမားကို သူတို့လူ ကျတော့ မခန့်ဘူးလေ။ မြန်မာလူမျိုးနဲ့ပဲ ဒီအလုပ်ကြမ်းအလုပ်ကို လုပ်ရတယ်။ သူတို့ခန့်ထားတဲ့ စက်ရုံမှူးဆိုတာ သူတို့ တရုတ်လူမျိုးနဲ့ပဲ ခန့်ရတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ စကားပြန်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ စကားပြန်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတော့ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိတယ်။ ရှိတဲ့အခါမှာ အလုပ်သမားတွေက ပြန်ပြီးတော့ ဒဏ်ကြေးဆိုတာ အရိုက်ခံရတယ်။ ဒဏ်ကြေးကို ငွေကြေးနဲ့ အရိုက်ခံရတယ်။”
အလုပ်သမားတွေဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို မရမချင်း ဆက်လက် ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ အလုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ – ဒီဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အလုပ်ရှင်က ဘာပြောလဲဆိုတော့ အလုပ်သမားထုကို သူက ပြောတဲ့စကားက သုံးရက်အတွင်းမှာ လုပ်ငန်းပြန်ဝင်ပါ။ တကယ်လို့ သုံးရက်အတွင်း မ၀င်ဘူးဆိုရင် ဒီအလုပ်သမားတွေ အားလုံးကို သူက ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ ရာဇသံကို သူက ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့ တလပဲကြာကြာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြာကြာပေါ့နော်၊ ကာလတခုအထိ မရမချင်းတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ သူတို့ အကုန်ချပြီးသွားပြီ။”
(သစ်ထူးလွင် Myanmar News Now ဆိုက်မှ…)
ပညာအတွေ့အကြုံ ငွေအရင်းအနှီး ဗဟုသုတ အမြော်အမြင် လဲစုံ ပြိဘဲ
စေတနာ မေတ်တာ ရှိရင် မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး၊စက်ရုံ အလုပ်ရုံ သွားထောင်ကြပေါ့ဗျာ၊
လူတွေလဲအလုပ် ရကြမယ် ပညာလဲရကြမယ် မဟုတ်လား
အဝေးကနေပြီး သူများကို လိုက်ဝေဖန်နေတာ ဘာအကျိုးရှိမလဲ?
၂၀၁၁ ခု နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက် က သတင်း
စီးပွါးရေး မငြိမ်မသက် ဂရောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ် ရလို့၊
တရုပ်နိုင်ငံနဲ့ ငွေကြေး ဖလှယ် ကြရင်
(၃၈) တြီလီယန် မှ ( ၆၄) တြီလီယန်[ယူအက်စ် ဒေါ်လာ ( ၅၆.၅) ဘီလီယန် ဘိုး] ထိ
” နှစ် ပြန်” နီးပါး တဟုန်ထိုး တိုးမြှင့် ပြီးစာချုပ်လိုက်တာ
ဥရောပ ရဲ့ ကြွေးဆုံးမဲ့ ပြသနာ နဲ့
နိုင်ငံတကာ စီးပွါးရေး ထိုင်းမှိုင်း ကျဆင်း နေတဲ့ ပြသနာ တွေရဲ့
မကြာခင်အပါတ် အောက်တိုဘာ (၁၉) ရက် မှာဘဲ ဂျပန်နိုင်ငံ နဲ့လဲ
ယူအက်စ် ဒေါ်လာ (၇၀) ဘီလီယန် ဘိုး အလားတူ
တရုပ်နိုင်ငံ ထုတ် အစိုးရငွေ စုလက်မှတ်များကိုလဲ
ကာလ အလယ်အလတ်ရော ရေရှည်ရော
ဝယ်ယူ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမယ်လဲ ပြော၊
South Korea Boosts China Currency Swap To Guard Against Financial Turmoil
By William Sim and Eunkyung Seo – Oct 26, 2011 3:47 AM PT
South Korea secured its second currency-swap agreement inaweek to shield the nation from any fallout from Europe’s debt crisis and the global slowdown.
South Korea and China will almost double their won-yuan swap line to 64 trillion won ($56.5 billion) from 38 trillion won, the Bank of Korea said inastatement in Seoul today. The three-year deal will expire on Oct. 25, 2014.
The agreement, together withasimilar deal signed with Japan on Oct. 19, offers Asia’s fourth-largest economy protection from funding shocks as Europe’s sovereign-debt crisis deepens and demand in South Korea’s largest export markets slows. The won has weakened 7.1 percent against the dollar over the past three months, the second-worst performer in Asia….
South Korea last week increased its currency-swap accord with Japan to $70 billion. The deal includedaone-year, $30 billion dollar swap line andawon-yen agreement of the same amount….
South Korea may use the swap deal to buy Chinese government bonds in the “mid- and long-term” as China opens up its capital market, Kim said.
“It’s important to enhance financial and currency cooperation to preemptively stabilize the financial markets amid escalating global economic uncertainties,” South Korean President Lee Myung Bak said after announcing the swap arrangement with Japan.
South Korea doubles currency swap deal with China
Last updated: October 26, 2011 11:00 pm
South Korea has doubled its currency swap arrangement with China to Rmb360bn ($57bn), further increasing the firepower available to protect its financial system from any turmoil in the eurozone.
This latest swap agreement with Beijing, announced duringavisit to Seoul by China’s vice premier Li Keqiang, comes onlyaweek after Seoul increased its swap facility with Japan to $70bn from $13bn.
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ကိန်း ဂဏန်းတွေကိုချတွက်ပြီး၊
မြင်ကွင်းကျယ်လို လွှမ်းမိုး ခြုံငုံနိုင်တဲ့ အမြင်ကိုပါ
ဆင်တကောင် နဲ့ မျက်ကန်းခြောက်ဦး ပုံပြင်လို
မှန်သလိုလ၊ို တယောက်တပေါက် ငြင်းခုံနေကြတာ၊
ခြုံကြည့်ရင်တော့ မပြည့်စုံ မမှန်ကန် ဖြစ်နေတာ၊
“ဘက်စုံအောင် အတွင်းကျကျ” ကြည့်တတ်မှ
ခုနေက အထည်အလိပ် ထုတ်လုပ်ရေးအသင်း အကြီးအကဲကပြောတာကိုသိရပြ၊ီ
အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာအထည်ထုတ်ကုန်ပေါ်ရွေးပြီး အခွန်တွေ အပိုတင်တာ၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မ ရတာ၊ ဗီယက်နမ်လို အလုပ်သမား တဦးချင်း တရက်ကို
အင်ကျီ အထည် ၂၀ မထုတ်နိုင်ဘဲ အထည် ၁၀ ထည်သာထုတ်နိုင်တာ၊
ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း တဒေါ်လာ ကို ၁၂၀၀ ကျပ် ကနေ ၈၅၀ ကျပ် ဖြစ်သွားတာ၊
ကမ်ဘာစီးပွါးရေးကျလို့ မြန်မာအထည်တွေတင်ပို့တာ က ၃၀ % ကျဆင်းသွားတာ
စတဲ့ အခက် အခဲတွေရှိကြောင်း၊ …….
အခြေအနေမှန် ကို ပြည့်စုံအောင် မလေ့လာဘဲ
မအောင်မြင်လို့ စက်ရုံတွေကို လေလံတင် ရောင်းလိုက်ကြတာ ဘာကြောင့်?
အလုပ်သမားတွေက အလုပ်မကြိုးစားတော့ဘဲ အစိုးရရုံးလခစားလိုဖြစ်သွားတာ၊
နံနက်တခါရုံးတက် လက်မှတ်ထိုး၊ တနာရီလောက်အလုပ်လုပ်၊
ကြားချိန်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး “လစ်” ကြ၊
ညနေရုံးဆင်းချိန် တခါ ပြန်လာပြီးလက်မှတ်ထိုး၊
ဒါဒွေကို မမြင်ချင်ဟန်ဆောင် ကြတာ၊
မဆီမဆိုင်တွေဖြစ်အောင် ရှောက်ရှောက် လှုံ့ဆော်တာ
သွေးထိုးတာမျိုးတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်တာလို့ယူဆ ရ တာပါ၊
Chiang Mai (Mizzima) – The world economic decline has caused the value of Burma’s clothing export sector to drop around 30 per cent since 2008, according to the Myanmar Clothing Manufacturers Association (MCMA).
” Compounding the fall is Europe’s tariff on clothing imports from Burma
when Bangladesh, Cambodia and Vietnam receive exemptions ”
” အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာအထည်ထုတ်ကုန်ပေါ်ရွေးပြီး အခွန်တွေ အပိုတင်တာ ”
လို့ ဘာသာပြန်ရင် အဓိပ္ပါယ် လွဲနေပါ့မယ်ဗျာ ။
အနောက်နိုင်ငံ တွေမှာ ၊ သူတို့နိုင်ငံ အတွင်းကို ၊
နိုင်ငံတကာက တင်သွင်းတဲ့ အဝတ်အထည်တွေကို ၊
ပုံမှန်ကောက်ခံနေတဲ အခွန်နှုန်းထား ( tariff ) တစ်ခု ရှိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေအပေါ် မှာတော့ ၊
သနားညှာတာတဲ့ အနေနှင့် အဲဒီ အခွန်နှုန်းထား ( tariff ) ကို ၊
လျှော့ပေး ( Reduce ) ဒါမှမဟုတ်
လုံးဝ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေး ( Exemption ) ပါတယ် ။
တခြား ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ၊
ဗီယက်နမ် ၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ် ၊ ကမ်ပူချား တို့က ၊
အဲဒီ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ( Exemption ) ကိုရနေပြီး ၊
မြန်မာနိုင်ငံ ကတော့ ၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေရဲ့ ၊
Economic Sanction ( စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ) စာရင်းထဲ မှာပါတဲ့အတွက်
အဲဒီ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ( Exemption ) ကို မရပါဘူး ။
မြန်မာနိုင်ငံ က အခွန်တွေ ပိုပေးရတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊
ကမ္ဘာ့ အော့်ကျောလန် နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အတွက် ၊
သနားညှာတာမှု ( အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် Exemption ) ကို မရတာပါ ။
ဥပမာ ပြောရရင် ၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေ အတွင်းကို ၊
ဂျပန် နိုင်ငံ က တင်သွင်းတဲ့ အဝတ်အထည်တွေ နှင့် ၊
မြန်မာနိုင်ငံ က တင်သွင်းတဲ့ အဝတ်အထည်တွေ နှင့် ၊
အခွန် အတူတူပါပဲ ။
မြန်မာပြည်က မို့လို့ဆိုပြီး အခွန် ပိုမပေးရပါဘူး ။
ဒါတောင် အဲဒီ အနောက်နိုင်ငံ တွေရဲ့ သဘောထားကြီးမှုကြောင့်သာ ၊
အထည်အလိပ် ကို တင်သွင်းခွင့် ပေးနေသေးတာပါ ။
ကျနော်သာ အဲဒီ အနောက်နိုင်ငံ တွေရဲ့ နေရာမှာသာဆို ၊
အဲဒီလို ကမ္ဘာ့ အော့်ကျောလန် မြန်မာနိုင်ငံ က ၊
ပစ္စည်းကို ဝယ်သုံးဖြစ်ဖို့ တောင် တော်တော် စဉ်းစားရမှာပါ ။
ဝင်ရှုပ်မိတဲ့အတွက် ၊ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ် ။
အဲသာဘဲ ကြည့်ဒေါ့အဘဖောရေ… ကြမ်းပိုးကိုလိပ် ဖွတ်ကိုမိချောင်း ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာ ကြေးမုံဂျီးဂ ပါရဂူဗဲ..။ သူပြောဒဲ့စဂါး တဆယ်နဲ့စား ရဒဲ့တပုံ လုံးဝဥဿုံဒဲ့ စာဆိုရှိဒယ်။ ဘယ့််နှယ်ဗျာ တဆယ်နဲ့စားပီးဒါတောင် နိုးဆိုဒေ့ါ ဘာကျန်ဒေါ့မှာလဲ။ သို့ပေမဲ့ပေါ့ဗျာ သူမမှားဗူး…မှားဒါအဘဖော။ သူပေါက်ကရရေးဒါ သွားဖတ်တာကိုး..။ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်သွားပီးကထဲဂ ကြေးမုံဂျီးစိတ်တွေ ဖောက်လာဒါဗဲဗျို့…။ ဆန်းဒေ့ါမဆန်းဗာဗူးလေ.. ကြေးမုံသဒင်းစာကို အားကျပီး နာမည်ယူထားဒယ်ဆိုမှဒေါ့…။ အားကျမဲ့ကျ ကြောင်ကြီးဖတ်လေ့ရှိဒဲ့ နယူးယောက်တိုမ်းစ်တို့ ဝေါစထရိဂျာနယ်တို့ဂို အားကျရောပေါ့ကွယ်…။ အေးလေ.. သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်သလောက်ပဲ ရပေမပေါ့..။